Ny ekipan'ny varotra ataontsika dia voaofana tsara sy efa za-draharaha amin'ny faritra manokana sy manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny vokatra. Noho izany manome mpanjifa fahalalana matanjaka momba ny vokatra sy fanohanana serivisy. Manome torolàlana momba ny fandidiana tsikelikely misy torohevitra mahasoa sy torohevitra mivantana avy amin'ny ekipanay izahay. Hatramin'ny fifandraisanao voalohany tamin'ny ekipan'ny varotra anay, hatramin'ny fanaterana sy fampiasana ny vokatray, dia manolotra fiofanana, serivisy ho an'ny mpanjifa ary fanohanana ara-teknika izahay hanomezana izay ilainao. Izany rehetra izany dia manampy anao hahazo vokatra tsara indrindra sy matihanina isaky ny mandeha.
Picosecond nd yag laser rafitra fitsipiky:
Fikarakarana hoditra mialoha
Izy io dia afaka mampiasa fangaro hydroquinone 4% sy Vitamina A hanaovana fanadiovana hoditra izay afaka misoroka ny hoditra tsy ho very rano alohan'ny fandidiana 3-4 herinandro.
ho an'ny Type 1 na tsy ilaina ny mampiasa ireo zava-mahadomelina ireo raha toa ka karazana 1 na karazany 2. Ilaina amin'ny karazana hoditra 3 sy 4.
Raha te-hanao faritra lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ianao na amin'ny fikosoham-bary, dia azonao atao ny mampiasa fanafody mampitony alohan'ny fitsaboana, mba hampiala-tanana ny marary.
Adiny iray alohan'ny fandidiana dia diovy amin'ny lidocaine (fanafody fanadonto eo an-toerana) ny faritra, avy eo sarony ny fonosana plastika hampiroborobo ny fifohana.
Ho fanampin'ny fampiasana ny lidocaine alohan'ny fitsaboana sy ny gel, dia mila mampitombo ny hamandoana amin'ny hoditra ihany koa mba ho voadio kokoa ny fitsaboana amin'ny laser mba hampihenana ny fahasimbana mandritra ny fitsaboana.
100-800mJ azo ovaina
1-20Hz azo ovaina
Ny angovo dia 100-300 mj, ary ny refy dia azo ovaina amin'ny 1-20Hz;
350-550 mj ny angovo, azo ovaina amin'ny 1-15Hz ny matetika;
600-800mj ny angovo, azo ovaina ny 1-10Hz
Isa ankehitriny, hodiovina izy io rehefa tsindrio indray mandeha; kitiho ny Count raha te hampiseho ireo teboka nampiasaina rehetra
famantarana vonona； Rehefa nivadika ho maitso i SIMMER dia azonao atao ny manindry ilay miasa.
Rehefa mirehitra ny ASA dia manitsaha ny jiro tongotra hamoaka hazavana
Teo aloha: 2021 Professional Pico 755nm Picosecond Laser Tattoo Removal Machine Ho an'ny teboka / pigmentation / fanesorana freckle
Manaraka: -30C Cryo 6 Cold Air Skin Cooling rafitra Masinina fanamafisana ny hoditra
picosecond azo entina nd yag laser fanesorana tatoa ...
Shr Ipl Opt, Masinina mpanentana hozatra Ems, Laser estetika Co2, Fanesorana volo Shr Opt Ipl, fanesorana ny holatra, Co2 Laser Laser miato,